» दक्षिण कोरिया जानका लागि रोजगार आवेदन फारम (Job Application Form) कसरी दिने?, के के कागजात चाहिन्छ?
८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १४:००
सन् २०२० भन्दा अघि कोरियन भाषा परीक्षा (Test) उत्तीर्ण गरेमा दक्षिण कोरियामा रोजगारीको अवसर पाइन्थ्यो। तर अब त्यतिले मात्रै रोजगारीको लागि ग्यारेन्टी नहुने व्यवस्था लागु भएको छ। कोरियन भाषाको परीक्षा सँगसँगै Skill and Competancy Test र स्वास्थ्य परीक्षण पनि उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै कोरियामा कामका लागि जान करारपत्र प्राप्त गर्न योग्य हुने नयाँ व्यवस्था लागु भएको हो। यी सबै परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि रोजगारीका लागि आवेदन फारम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यो लेखमा हामी रोजगार आवेदन फारम (Job Application Form) कसरी बुझाउने भन्ने बारे जानकारी दिन जाँदै छौँ।
रोजगार आवेदन फारम कहाँबाट लिने?
फारम EPS शाखाबाट वितरण हुन्छ।
EPS कार्यालयको परिसर भित्र रहेको बैङ्कको काउन्टरमा अमेरिकी डलर ५ बराबर (अघिल्लो दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सटही दरले हुन आउने) नेपाली रुपैयाँ तिरेर पाउन सकिन्छ।
कार्यालय समयमा आवेदक आफैँ उपस्थित भएर आवेदन फारम दर्ता गराउनु पर्छ।
एम.आर.पी. राहदानीको अनुहार प्रस्ट देखिने गरी रङ्गिन फोटोकपी १ प्रति (राहदानीको बहाल अवधि कम्तीमा एक वर्ष रहेको)
स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति
प्रहरी प्रतिवेदनको सक्कल प्रति
आवेदन फारम बापत शुल्क तिरेको बैङ्कको सक्कल बैङ्क भौचर
३ महिना यता खिचेको दुवै कान देखिने एम.आर.पी. साइजको सेतो पृष्ठभूमि भएको, Upper Chest देखिने, सेतो कपडा नलगाएको अनुहार प्रस्ट देखिने पासपोर्ट साइजको रङ्गिन फोटो एक प्रति
राहदानीको सक्कल प्रति साथमा लिएर आउनुपर्छ।
योग्य सूची (Roster) मा समावेश हुनु भनेको कामदारका रूपमा कोरिया जान योग्य हुनु हो तर शत प्रतिशत (१००%) काम पाउने ग्यारेन्टी भने होइन।
गणतन्त्र कोरियाबाट निष्कासन भएका, over stay र illegal रूपमा कोरिया बसेका व्यक्तिहरू रोजगार आवेदनका लागि अयोग्य ठहरिने छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले राहदानीमा नाम, जन्म मिति, ठेगाना आदि परिवर्तन गरी आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ।
स्रोत: EPS कोरिया शाखाको वेबसाइटबाट http://epsnepal.gov.np/